Ithegi: izilumkiso kwimidiya yoluntu | Martech Zone
Maka: izaziso zosasazo zasekuhlaleni
Ngelixa uninzi lwamaqonga etekhnoloji yentengiso yokujonga igama kunye nohlalutyo lweemvakalelo zijolise kuphela kwimithombo yeendaba zentlalo, iiBrandmentions ngumthombo obanzi wokubeka iliso kuyo nayiphi na into okanye konke okukhankanyiweyo ngegama lakho kwi-intanethi. Nayiphi na ipropathi yedijithali edityaniswe kwindawo yakho okanye ekhankanye uphawu lwakho, imveliso, i-hashtag, okanye igama lomqeshwa… ijongiwe kwaye ilandelwe. Kwaye iqonga leBrandmentions libonelela ngezilumkiso, ukulandelela, kunye nohlalutyo lweemvakalelo. Iimpawu zentengiso zenza amashishini ukuba: Akhe ubuDlelwane obuDibeneyo- Ukufumanisa kunye nokuzibandakanya
NgoLwesihlanu, Februwari 13, 2015 NgoLwesibini, Meyi 12, 2015 Douglas Karr
Kuhle ukubona ukukhula okuqhubekayo kwamaqonga eendaba ezentlalo ehla kwixabiso kwaye efumaneka kumnini weshishini ophakathi. I-Socialdraft iqala nge- $ 29 nje ngenyanga ngeempawu ezazingamakhulu okanye amawaka eedola kwiminyaka embalwa edlulileyo. Iqonga labo leqela li- $ 59 ngenyanga kwaye iakhawunti yabo yeShishini yi- $ 99 nje. Zonke iiakhawunti ziza nenkxaso kunye netoni yeempawu. Nge-Socialdraft, iinkampani ziyakwazi ukubeka esweni uphononongo
IGeofeedia liqonga elinelungelo elilodwa lomenzi elinokuthi abathengisi basebenzise ukubeka iliso kunye nokuhlalutya indawo yemithombo yeendaba esekwe kwindawo. Esi inokuba sisicwangciso esiliqili sokuthengisa kulawulo lwegama, okanye kwizicwangciso zokufumana kwangaphambili. Mhlawumbi ungumnikezeli ngenkonzo okanye unabameli beenkonzo ezininzi kwimimandla ethile-unokujonga konke ukugcwala kwimithombo yeendaba zentlalo ngokukhankanywa okanye kwabo bafuna abathengi abafuna uncedo. Iimpawu eziphambili zeGeofeedia kunye nokuBekwa kweliso kweziBonelelo-Hlanganisa kunye noovimba beendaba zentlalo
NgoLwesibini, Januwari 13, 2015 Douglas Karr
Ngaphambi kokuduma kwimithombo yeendaba zentlalo, bekukho inkampani yokhathalelo lwengca eyayibhala yonke iminxeba yabathengi kwaye yahlelwa ngokwesihloko. Inkqubo yajika yenjinjini yokuthengisa kuba babenokuthi babone, ngokwejografi, imiba ebikhula kwingingqi kwaye emva koko bathumele ii-imeyile ezijolise kakhulu ngokusekwe kwizihloko ezihamba phambili. Abathandi bokunakekela ingca baya kubona isilumkiso kwaye emva koko baye kuthenga isisombululo esifanelekileyo kwivenkile- ngamanye amaxesha nge